Home > Train Travel Switzerland > The Beauty Of The Bernina Express
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 31/03/2021)
Bernina Express bụ otu n'ime ndị kasị mara mma ụgbọ okporo ígwè njem n'ụwa. Na mbụ, na Rauma Line si Dombas ka Andalsnes (Norway), ị pụrụ ịnụ ụtọ echiche nke elu ọnụ ọnụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụ ugwu ugwu na ugwu dị larịị ka ị na-agafe Rauma River. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịhụ Europes kasị elu nkume ihu Trollveggen, and the gorgeous chicken akwa.
Ebe Bernina Express Train njem amalite – Italy
Pụtara image of Cinque Terre Italy.
na Cinque Terre n'etiti Levanto na La Spezia (Italy), ị agafe picture-zuru okè na obodo ntà, oliv, ubi-vine, na-agaghị echefu echefu turquoise Ligurian Sea. The Central Rhine Railway n'etiti Bingen na Koblenz (Germany) dị ka ihe nke a fairytale na oge ochie castles n'elu miri.
Ikekwe, ihe kasị mma na enchanting sinik okporo ígwè na-agba ịnyịnya na Europe bụ Bernina Express. Of niile sinik Swiss ụgbọ okporo ígwè agafe, Bernina bụ ihe ndị kasị mma. Nke a ụgbọ okporo ígwè na-enye panoramic echiche si Chur & St Moritz n'ebe ọwụwa anyanwụ Switzerland ndịda Tirano na n'ebe ugwu nke Italy. Nke a ụgbọ okporo ígwè ewe ihe dị ka 4 awa ka ị ekpuchi 90 kilomita site na ice nke Switzerland ruo anyanwụ nke Italytali. Njem a gụnyere 55 tunnels na n'elu 196 àkwà mmiri. The ụgbọ okporo ígwè bụ dị n'elu 120 afọ a UNESCO ụwa nketa saịtị. The Bernina Express udeme a akara na glasia Express na-ekpuchi dum Landwasser Viaduct. Nso Pontresina, okporo ígwè ọdọk aka Bernina Pass, mgbe ahụ Morteratsch glasia. Gbọ okporo ígwè kachasị elu dị na Hospice Bernina nke na-anọdụ n'elu 7000 ụkwụ elu oké osimiri.
On n'akụkụ nke ọzọ nke ugwu a, ụgbọ okporo ígwè na-aga site pụta osisi n'ihu nkwụsị na na ọmarịcha obodo nke Poschiavo. The ụgbọ okporo ígwè ahụ wee kwupụta The Epic Brusio gburugburu Viaduct. Fọrọ nke nta niile photos na njem a na-ewere ọnọdụ e.
Cologne na Koblenz Ụgbọ oloko
Essen na Koblenz Ụgbọ oloko
Trier na Koblenz Ụgbọ oloko
Ndị a bụ ụfọdụ isi njem ozi ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịnara ụgbọ okporo ígwè Bernina Express;
Ọ bụrụ na ị na- ejegharị ejegharị na oyi, na northbound ụzọ ukwuu n'ime njem mgbe ọ bụ ọchịchịrị, otú ị ga-atụ uche a otutu nke mara mma.
Ọzọkwa, klas nke abụọ dị ezigbo mma na ụgbọ oloko a yana otu ọrụ niile dị ka klas mbụ, ya mere ọ dịghị mkpa na-na-akwụ ego ma ị chọrọ ubé obere mmadụ jupụtara aba.
na southbound ụgbọ okporo, ị chọrọ ka a nọ ọdụ n'aka nri n'akụkụ nke ụgbọ okporo ígwè. ebe ọ bụ na Switzerland mma nwere ike anya na nke a n'akụkụ. na na northbound ụgbọ okporo, ị chọrọ na-anọdụ na n'aka ekpe n'akụkụ.
The nnukwu panoramic windo anaghị emeghe. E nwere obere oghere na-esote na ụgbọ okporo ígwè ụzọ. I nwere ike na-gị foto site na ha (enweghị e a echiche).
Book Tickets N'ihi Bernina Express
Ị na-eme atụmatụ a njem na Bernina Express? Ọ gaghị 3 nkeji na-ahụ ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè on www.saveatrain.com. Wet ke ụbọchị na oge ị ga-achọ ịga, na anyị ga-enye gị na nke kacha mma price maka njem gị, enwere ike ịkwụ ụgwọ ya n'ọtụtụ ụzọ gụnyere Paypal na Bitcoin.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-bernina-express%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#bernina #bernina awara awara Train Travel travelswitzerland